एजेन्सी/ मुटुको रोग लागेको हो होइन भन्ने पत्ता लगाउन विभिन्न प्रकारका जटिल जाँच गराउनुपर्छ भनेर बिरामीलाई निक्कै चिन्तित बनाएको हुन्छ । आत्तिनु पर्दैन, यो रोगको सजिलोसंग निदान गर्ने तरिका पनि छन् । एउटा नाप्ने फित्ता महत्वपूर्ण साधन हुन सक्छ । अमेरिकी मुटु संघको बैठकमा प्रस्तुत भएको एक प्रतिवेदनमा ठुलो कम्मर हुनु हृदयाघातको वा...
एजेन्सी/ बाँदरमा गरिएको परीक्षण सफल भएसँगै बैज्ञानिकहरुले पुरुषका लागि नयाँ क्रिमको उत्पादन गरेका छन् । जुन क्रिमले गर्भनिरोधकका रुपमा काम गर्नेछ । त्यो क्रिमको माध्यमबाट पुरुषमा हुने शुक्रकिटको प्रवाहलाई रोक्न सक्ने बताइएको छ । उक्त क्रिम पुरुषको त्यो ट्युबमा हाल्नुपर्छ जहाँबाट शुक्रकिट लिङ्गतर्फ जाने गर्छन् । यो गर्भनिरोधक...
शुक्रकीट सम्बन्धी ९ तथ्य, जुन तपाईँलाई थाहानहुन सक्छ
वीर्यमा रहने शुक्रकीट (स्पर्म) बारे अधिकांशलाई धेरै कुरा थाहा होला। तर, शुक्रकीटबारे केही यस्ता तथ्य छन् जुन सबैलाई जानकारी नहुन सक्छ। हेरौँ शुक्रकीट सम्बन्धी यी ९ तथ्यः १. एउटा मानिसका शुक्रकीटमध्ये ५० प्रतिशत मात्र सिधा अगाडि तैरन्छन वा अघि बढ्छन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आधा मात्र सक्रिय हुन्छन्। केही शुक्रकीट गोलाकार तैरिन्छन्...
म त्रजिना जति, पेसाले नर्स। नर्स भएर करारमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरमा काम गर्न थालेको करिब पाँच वर्ष भयो। पाँच वर्षदेखि यस केन्द्रमा भइरहेका गतिविधि र यसले गरेका प्रगतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा संलग्न छु। तर, अचानक मिति ०७४ साउन २९ गते मलाई निष्कासन गरिएको पत्र थमाइयो। कारण थियो, अस्पताल प्रशासनको मनपरी शैलीको विरूद्ध...
यतिबेला देशका विभिन्न भागका बासिन्दा बाढी-पहिरोको चेपटामा छन्। खासगरी तराईका बासिन्दा डुबानमा परेपछि घर छाडेर सुरक्षित स्थानमा सरेका छन्। बाढी-पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरुको सामूहिक बसाइ हुने भएकाले खाना, शुद्ध पिउने पानी, उचित शौच जस्ता अत्यावश्यक कुरामा समस्या पर्छ। यस्तो बेलामा लामखुट्टे, मुुसा र सर्पका कारण पनि रोगको जोखिम...
एजेन्सी/ ब्लड प्रेशर आधुनिक जीवनशैलीको बीमारीका रुपमा लिइन्छ । यसलाई ‘साइलेन्ट किलर’ भन्ने गरिन्छ । मुटुको धमनीहरूमा प्रेशर बढ्ने बेला अर्गन सप्लाई गर्नका लागि ज्यादा प्रेशर लगाउनु पर्छ । यसलाई नै हाई ब्लड प्रेशर भन्ने गरिन्छ । टाउको दुख्नु, चक्कर आउनु र धड्कन बढ्ने जस्ता यसका प्रमुख लक्षण हुन् । हाई ब्लड प्रेशर एक गम्भीर समस्या...
महिनावारीमा यी ४ रंगको रगतबाट थाहा पाउनुस् तपाईं स्वस्थ हुनुहुन्छ कि अस्वस्थ
एजेन्सी/ महिनावारी महिलाको जीवनको एक अभिन्न अंग हो । यो प्रक्रिया ५ देखि सातदिनसम्म चल्छ भने कतिपय महिलाको ४ देखि ५ दिनसम्म चल्छ । यस क्रममा महिलालाई चिडचिडाहट हुने, शरिर दुख्ने, पेट दुख्नेलगायतका विभिन्न समस्या देखा पर्न थाल्छन् ।सामान्यतया सबैलाई लाग्छ कि महिनावारीको समयमा हुने रक्तश्राव रातो नै हुन्छ । तर वास्तवमा त्यसो हुदैन । रगतको...
सेक्स कतिबेला र कतिपटक गर्दा राम्रो ? जानी राखौं
एजेन्सी/ साच्चै भन्ने हो भने सेक्स गर्ने कुनै निश्चित समय छैन न त कति पटक गर्ने भन्ने कुनै वष्तुनिष्ठ सिद्धान्त नै । मानिसहरु आफ्नो समय र उपयुक्तताका आधारमा यौन कर्म गर्ने गर्दछन् । यद्यपी अधिकांशले रातिमा सेक्स गर्ने मान्यता भने हामीमाझ स्थापित छ । तर, अध्ययनहरुले भनेका छन् कि रातिमा भन्दा विहानको सेक्स उत्तम हुन्छ । कारण एकाविहानै...
यौन क्षमता वृद्धि गर्ने अचुक उपाय : खानुहोस् यी खानाहरु(भिडियो)
यौन क्षमता वृद्धि गर्ने अचुक उपाय : खानुहोस् यी खानाहरु, हेर्नुस एक रिपोर्ट...